Apple TV + dia nanao fifanarahana vaovao tamin'ny orinasa mpamokatra Meadowlark Media | Avy amin'ny mac aho
Efa volana maromaro no tsy nisy vaovao momba ny vaovao fifanarahana fiaraha-miasa eo amin'ny Apple sy ny orinasa mpamokatra hafa, fifanarahana fijery voalohany. Ity karazana fifanarahana ity dia mahatonga an'i Apple ho orinasa voalohany manana safidy hisafidy izay atiny vaovao noforonina. Raha tsy liana amin'ny Apple, ny orinasa mpamokatra dia hanohy ny fihodinan'ny fifandraisana mba hanolotra ny votoatiny amin'ny orinasa hafa.
Ny fifanarahana farany nataon'ny sehatra horonan-tsarimihetsika mivantana an'i Apple dia hita ao amin'ny orinasa mpamokatra Meadowlark, orinasa mpamokatra izay noforonina tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Talen'ny ESPN teo aloha John Skipper sy Dan Le Batard izay niasa ho an'ny Radio ESPN ary mpandray anjara tsy tapaka amin'ny fandaharana ara-panatanjahantena.
Raha jerena ny toerana niasan’ny tompon’ity orinasa mpamokatra ity teo aloha, dia hita fa ny ankamaroan'ny votoaty dia hihodinkodina amin'ny fanatanjahantena, farafaharatsiny amin'ny ankamaroany.
Araka ny voalazan'ny Deadline:
Tamin'ny Janoary, Skipper sy Le Batard dia nanambara ny fananganana Meadowlark, orinasa votoaty vaovao manana fomba fijery hafa noho ny mahazatra. Meadowlark dia hiara-hiasa amin'ireo mpilaza tantara malaza amin'ny tetikasa votoaty isan-karazany miaraka amin'ny fifantohana voalohany amin'ny fanatanjahantena. Tamin'ny volana aprily, DraftKings sy Meadowlark dia nanambara votoaty tokana, fizarana, vola ary fifanarahana fanohanana ho an'ny fampisehoana. Ny Seho Dan Le Batard miaraka amin'i Stugotz.
Fanatanjahantena bebe kokoa
Tsy diso ny fahatsiarovana ahy, ny hany votoaty ara-panatanjahantena hita ao amin'ny Apple TV + dia ny andiany Ted Lasso, raha azo raisina ho votoaty ara-panatanjahantena izany. Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny Apple TV + dia manana karazany maro izahay fanadihadiana ara-tsosialy momba ny natiora, dia… Miampy seho resaka isan-karazany toa an'i Oprah Winfrey sy John Stewart.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple TV + dia nanao fifanarahana vaovao tamin'ny orinasa mpamokatra Meadowlark Media
Wallpapers tena misy sy mavitrika Monterey